Cinque Terre: Kugamuchirwa kunzvimbo inoyevedza muItaly | Absolut Kufamba
Cinque Terre: Kugamuchirwa kunzvimbo inoyevedza muItaly
Alberto Makumbo | | Italia
Kutenderera pasirese kune mataundi asingaverengeke ane ruvara ndiye protagonist: dzimba mumatoni ekare, mune imwe toni kana mafashama neumadhorobha hunyanzvi pakati payo kurasika kuitira kutora yakanakisa Instagram pikicha. Asi vashoma vanofananidza ne Nyika shanu, kana iyo paradhiso ine mavara mazhinji iyo inotarisana neGungwa reLigurian, muItari, kuburikidza nemisha mishanu isingamisike.
1 Nhanganyaya kuCinque Terre
2 Iyo misha yeCinque Terre
3 Cinque Terre nemapoka evanhu
Nhanganyaya kuCinque Terre
Kazhinji, takaona paInternet mufananidzo weguta chairo reItaly rakatarisana negungwa uye rakapinda nemavara, ayo anoperekedzwa nezita rekuti Cinque Terre. Nekudaro, guta iri rinowanzo kuve Manarola, inozivikanwa kwazvo pamakona mashanu anoumba Nyika shanu idzi mudunhu reLa Spezia, kuchamhembe kweItaly uye yakashambidzwa neGungwa reLigurian.
Maguta mashanu anopindura kuzita re Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola uye Romaggiore uye ane nhoroondo yakatangira muzana ramakore regumi nerimwe. Tichifunga nezvehunhu hwenharaunda ino, iyo nzvimbo inozivikanwawo se Ligurian Riviera, iyo yekutanga inozivikanwa nuclei, Monterosso naBernazza, vakaendesa chiitiko chekurima mu "materu" akasiyana akaumbwa mumakomo zvisinei nekurwiswa kunogara kuripo nevamwe veTurkey avo vakamanikidza vagari veko kumisa nhare dzakasiyana uye kudzora shongwe.
Kubva pakutanga kwezana ramakore rechiXNUMX, kuvakwa kwe njanji chitima pakati pemataundi akasiyana neguta reGenoa Yakabvumidza kukwezva vanhu vazhinji vanoda kuziva kunyangwe vachisiya zviito zvekurima izvo zviri kuitika mukugadzirisa nhasi.
Nenzira iyi, mepu ine mavara yeCinque Terre, yakatarwa paki yakasikwa, yakakamurwa pakati pemisha mishanu inofadza kwaunogona kufamba mumigwagwa yayo, kutanga kukwira nzira trekking kana kukurudzira yako yakajairika Mediterranean charm.
Iyo misha yeCinque Terre
Kuti ugone kuronga kushanya kwako kuCinque Terre pamwe nekukwanisika, pazasi tinoongorora, rimwe nerimwe, mataundi anoumba nzvimbo inoyevedza uye kuti iwe unogona kushanyira nekubatanidza mabhazi kuburikidza neyakakurudzirwa Cinque Terre Kadhi.
Pamutemo Monterosso al Mare, guta iri ndiro rekumadokero uye rine vanhu vazhinji muCinque Terre, ine mabasa asingaverengeki, maresitorendi nemahotera. Kana iwe zvakare uchida kunakidzwa neimwe yeiyo mahombekombe akanakisa kubva kumahombekombe ekuchamhembe kweItari, pano iwe unowana mamwe emakamuri akanaka kwazvo munzvimbo iyi.
Kana zvasvika kune zvayo zvinonyanya kufarirwa, Monterosso ine iyo Chechi yeSan Juan Bautista, iri mutaundi rekare uye inoumbwa nemachechi akasiyana kubva muzana ramakore rechiXNUMX, kuwedzera kune imba yeNobel Prize muMabhuku Euggenio Montale o iyo Il Gigante chifananidzo, iyo inomiririra mwari Neptune uye yakavakwa muna 1910.
Guta rechipiri rekumadokero kuseri kweMonterosso ndiVernazza, iri padombo rinoshamisira rakambundirwa negungwa kwaunogona kunakidzwa nenzvimbo dzakanakisa dzegungwa dzeCinque Terre.
Pakati pezvakanaka zvaunogona kushanyira muVernazza tinowana iyo Chechi yeSanta Margarita de Antioquia, yakavakwa muzana ramakore rechiXNUMX munzira yeGoth; yavo minda yemizambiringa neminda yemiorivhi, iyo inopa nzvimbo yeimwe yemafuta akanaka muItaly; kana guta rekare rine dzimba dzine mavara uye amburera dzinoenderana apo iwe unogona kuwana aperitif ine akanakisa maonero.
Guta repakati reCinque Terre iri chidiki pane zvishanu, asi hazvidarike zvinonakidza izvo. Kunyangwe isina mukana wakanangana negungwa, Corniglia inopa akadzikama uye nerunyararo mamiriro pamwe nenzvimbo dzinoyevedza senge Chechi yeSanta Caterina uye iyo Parishi yeSan Pedro. Sekuda kuziva, kana uchiwana kwaunogona kusarudza kwira matanho e377 eVia Lardavina, kana kutora bhazi revashanyi rinokubatanidza iwe neguta.
Uye isu tinouya kudhorobha iro rawaona kakawanda paInternet uye pasocial network. Yakafarirwa nechero dzimba dzine mavara dzakatarisana negungwa, Manarola inoumba kukwezva kukuru panguva yekushanya kuburikidza neCinque Terre nekuda kwayo ngano dzimba mumatoni ekare. Izvo zvakafanana zvakadudzirwa nanyanduri Lino Crovara "semukoko padombo, dendere regungwa pamusoro pemasaisai, taundi uko kazeveve kemafungu kanobata nzeve dzinoteerera dzemweya."
Iyo yenhetembo labyrinth uko, zvinoshamisira, iro guta ndiko kukwezva kwaro. Saka Nakidzwa nekunhuwirira kwemigwagwa yayo, iyo yechinyakare mhepo kana zvinonaka zvinopihwa neayo yakakurumbira chinot usati wasvika kuguta rekupedzisira munzira.
Iwo ekumabvazuva ekumadhorobha eCinque Terre anozivikanwawo nedzimba dzayo dzine mavara, kunyangwe iri nzvimbo yakanyarara kupfuura maviri apfuura.
Zvayo zvinokwezva zvinosanganisira iyo Chechi yeSan Juan Bautista, yakavakwa muna 1340; iyo Riomaggiore Castle, pamusoro peguta kubva pakuvakwa kwayo muzana ramakore rechiXNUMX; kana chiteshi chengarava dzine mavara-mavara dzinokukoka iwe kuti ugare panzira uye utarise hupenyu kuenda nekutora yakanakisa yegungwa.
Cinque Terre nemapoka evanhu
Cinque Terre yakaumbwa ne mataundi akasiyana ayo, dzimwe nguva, asingakwanise kugamuchira vangangoita mamirioni maviri nemazana maviri evashanyi aakagamuchira muna 2.5.
Ichi ndicho chikonzero chikuru chakatungamira bhodhi reko rekushanya ku ganhurira kugona kweCinque Terre chaiyo paki kune 1.5 mamirioni evashanyi kubvira 2016, kunyanya kana zvasvika pakudzivirira izvi Nhaka yehupenyu neasco uko mamiriro ayo emunharaunda anotambura nemafungu evashanyi. Uye ndezvekuti, semutungamiri wepaki, Vittorio Alessando akataura "zvinogona kuita senge eccentric chiyero, kunyangwe kana iko kuita kuri kuwedzera kushanya, asi kwatiri isu mubvunzo wekupona."
Mutemo wakakurudzirwa kwazvo unokurudzira kuti unakidzwe nerunyararo rwendo, mune zvese zvakatarwa.
Kana iwe uri kutsvaga kuti uzive imwe yemakona anoyevedza eItari, bhuku bhuku vhiki kubva kuGenoa kuti uzvirasire iwe muparadhiso iyi yevaravara uye nhoroondo kwauchazoda kugara nekusingaperi.
Ungade here kushanyira Cinque Terre?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Cinque Terre: Kugamuchirwa kunzvimbo inoyevedza muItaly
Grottoes yeSan José